Tenga Spotify Vateveri Zvakachipa, $ 8 ye1000 Real Spotify Vateveri
Tenga Spotify Vateveri Vakachipa
Ratidza pasi rose kuti iwe wakakwana sei mumimhanzi yaunogadzira uchishandisa sevhisi yedu yepamusoro - "Tenga Spotify Vateveri Vakachipa". Ratidza chinzvimbo chako chose muindastiri yemimhanzi. Vamwe vateveri vanoreva kuwedzera kuburitswa, uye kuwedzera kuratidzwa kunoreva, yakawanda mufananidzo weako brand. Usarega uyu mukana uchibva mumaoko ako, tora Spotify Vateveri pamitengo yakachipa padombo rako reSpotify. Nebasa redu rinokurumidza kwazvo, odha yako inosimbiswa mumaminetsi mashoma.
Tenga Spotify vateveri uye uwane mukurumbira senge pro muimbi munguva pfupi. Nedu tip-yepamusoro masevhisi, iwe unogona kuve nezvinangwa zvako zvese zvasangana nekuwana vateveri chaivo pane ako Spotify profile iyo inogona zvakare kugonesa mukana wekuratidzwa pane vateveri 'playlists. Vanhu vachada kuzvibatanidza pavachaona vamwe vanhu vachikutevera. Hatife takakubvunza iwe mapassword kana zvimwe zvinhu, uye kana paine chero chaunoda kuti utaure, nyanzvi dzedu dziripo kuti tinzwe zvaunotaura.
​Wakagadzirira here kuti nziyo dzako dzifambiswe pane ako ekutevera mazita kana kuratidza tarenda rako kuburikidza Spotify Inotamba? SOCIIC inogona kukubatsira iwe kuzviita nenzira dzausingakwanise kufungidzira. Kuwana kuwanda kune ako mavhidhiyo zvinokwanisika chete kana iwe wawana yakaringana huwandu hwevateveri, batanidza pachako neyakanakisa yemusika musika uye utenge 50, 100, 250 Spotify vateveri pasina kupinda mudambudziko. Kana iwe usingaoni iyo yakanyorwa pane saiti, gadzirisa iyo nenzira yaunoifarira iwe nekugutsikana pahunhu.
Nei ndichifanira kutenga Spotify Vateveri?
Kune zvikonzero zvakawanda nei uchifanira kutenga vateveri veSpotify. Ichakubatsira iwe kuratidza vanhu kuti vafarire basa rako uye nekudaro, batsira vamwe vanhu kusarudza kukutevera. Kutenga Spotify vateveri zvakachipa uye zvakavimbika uye zvakachengeteka pa SOCIIC. Kuwana yako odha zvinongotitorera maminetsi mashoma.
Vateveri vanouya nemutengo wakachipa here?
Zvirongwa zvese pa SOCIIC akatemerwa mutengo, saka haufanire kupaza bhangi. Unogona kutenga vateveri veSpotify uye utore nhanho imwe kumberi mumutambo chaiwo.
Icho chaicho chaicho Spotify kukwidziridzwa?
Kwete chete ndeye kukwidziridzwa chaiko, asi zvakare iri 100% yakachengeteka uye isina kusiya zvakaipa paakaundi yako kana chimiro chero. Paunotenga chirongwa chekusimudzira chevateveri vako veSpotify, zvione iwe uri mumaoko akanaka sezvo isu takabata hunyanzvi mune ino ndima senge munhu.
Ini ndichawana Spotify playlist vateveri futi?
Ehe. Chii chinoita isu vakanakisa ndechekuti isu tinokupa iwe vese vateveri veSpotify vateveri uye vateveri veSpotify playlist. Nenzira iyi, iwe unozokwanisa kusevha imwe yakanaka mari yekutenga kwako kunotevera.
Ini ndichave ndakarambidzwa kana ndikatenga Spotify kukwidziridzwa kune vateveri?
Kwete. Haungarambidzwe kana iwe ukakwidziridza yako Spotify kubva kwatiri. Ese matekinoroji atinoshandisa ari 100% akachengeteka uye isu tinogona kuvimbisa kuchengetedzeka kweakaundi yako. Zvese zvatinoita zvinoenderana nemitemo nemamiriro eSpotify.